Ụzọ mkpirisi iji gbanwee taabụ ọrụ na Excel
Software Edee akwụkwọ
Otu esi gbasaa gburugburu na taabụ taabụ na Excel
Ịga ebe dị iche iche data dị mfe karịa ka ị na-eche
Excel nwere ọtụtụ ụzọ ị ga-esi gaa na ebe dị iche iche data dị na akwụkwọ ọrụ ma ọ bụ n'etiti akwụkwọ ọrụ dị iche iche n'otu akwụkwọ ọrụ.
Ụfọdụ ụzọ - dị ka iwu Go Go - nwere ike ịnweta site na ijikọ ọnụ ụzọ mkpirisi keyboard, nke, mgbe ụfọdụ, nwere ike ịdị mfe - na ngwa ngwa - iji karịa nru.
Jiri mkpirisi mkpirisi iji gbanwee ihe omume na Excel
A na-eme mgbanwe n'etiti akwụkwọ ọrụ na akwụkwọ ọrụ Excel na-adị mfe site na ịpị na taabụ na ala nke akwụkwọ ọrụ ahụ , ma ọ bụ ụzọ dị ngwa ịme ya - ọbụlagodi na ọ bụ n'echiche nke ndị na-ahọrọ iji ụzọ mkpirisi keyboard ma ọ bụ ụzọ mkpirisi igodo mgbe o kwere omume.
Ma, dị ka ọ na-eme, enwere igodo mkpirisi maka ịgbanwu n'etiti akwụkwọ ọrụ na Excel.
Igodo ndị a na-eji bụ:
Ctrl + PgUp (peeji nke elu) - megharịa otu mpempe aka ekpe Ctrl + PgDn (peeji nke ala) - megharịa otu mpempe akwụkwọ n'aka nri
Otu esi gbanwee n'agbata ihe eji eme ihe site n'iji ihe ndiri mkpirisi
Iji gaa n'aka nri:
Pịa ma jituo igodo Ctrl na keyboard.
Pịa ma hapụ igodo PgDn na keyboard.
Ịkwaa mpempe akwụkwọ ọzọ na pịa aka nri wee hapụ igodo PgDn ugboro abụọ.
Iji gaa n'aka ekpe:
Pịa ma hapụ igodo PgUp na keyboard.
Ịkwaa mpempe akwụkwọ ọzọ na aka ekpe ma hapụ igodo PgUp ugboro abụọ.
Iji Gaa na Ụzọ mkpịsị uhie iji gbanwee Ihe Omume Excel gburugburu
Go Go iwu na Excel nwere ike iji ngwa ngwa na-agagharị na sel dị iche iche na akwụkwọ ọrụ.
Ọ bụ ezie na ị na-eji Go Ọ bụghị nke ahụ bara uru maka akwụkwọ ozi nwere nanị ogidi na oghere ole na ole, ma maka akwụkwọ edemede dị ukwuu, ọ bụ ụzọ ọzọ dị mfe isi na otu ebe nke akwụkwọ ibe gị nye onye ọzọ.
Gaa rụọ ọrụ site:
Imepe Gaa Iji igbe;
Na- edegharị na ebe ndị mmadụ na-aga ebe a na Reference Reference na ala nke igbe ahụ;
Pịa OK ma ọ bụ na ịpị bọtịnụ Tinye na keyboard.
Ihe si na ya pụta bụ na mkpụrụ ndụ na-arụsi ọrụ ike na- amafe aka na mkpokọta cell nke etinyere na igbe.
Tinye ọrụ gaa na
Na Gaa Iji nye iwu nwere ike rụọ ọrụ ụzọ atọ:
Site na ịpị Ụlọ > Chọta & Họrọ > Gaa na menu ihe ederede na òké.
Site na ịpị igodo F5 na keyboard.
Site na ịpị igodo Ctrl + gụkọta na keyboard.
Na-echekwa nyocha Cell maka iji rụọ ọrụ
Ihe mgbakwunye ọzọ Go Go nwere bụ na ọ na-echekwa na mbụ abanye na ntinye aka na nnukwu window Go To window n'elu igbe.
Ya mere, ọ bụrụ na ị na-awụlikwa na-aga n'ihu ma ọ bụ n'agbata ebe abụọ ma ọ bụ karịa nke akwụkwọ edemede, Gaa Ịnwere ike ịchekwa gị ọbụna oge ka ukwuu site na iji mpaghara ntinye ederede n'ime igbe.
A na-echekwa sistemụ sistemụ na igbe ahụ ma ọ bụrụhaala na ụlọ ọrụ na-emeghe. Ozugbo e mechibidoro ya, a na-ehichapụ ndepụta nke ederede ederede na Go To dialog.
Ị na-agagharị na Gaa na Nlereanya
Pịa F5 ma ọ bụ Ctrl + g na keyboard iji wepụta igbe Go Go .
Pịnye na ntinye aka ederede nke ebe achọrọ na Reference line nke igbe. N'okwu a: HQ567 .
Pịa na bọtịnụ OK ma ọ bụ pịa bọtịnụ Tinye na keyboard.
Igbe ojii nke gbara ya gburugburu na-arụsi ọrụ ike ga-adaba na cell HQ567 na- eme ya ka ọ bụrụ ọhụrụ ọrụ arụ ọrụ.
Ka ịkwaga na cell ọzọ, megharịa nzọụkwụ 1 ruo 3.
Ị na-agagharị n'etiti Ngwaọrụ na Gaa
Gaa A pụkwara iji ya mee njem na ọkwa dị iche iche n'otu akwụkwọ ọrụ ahụ site na itinye aha mpempe akwụkwọ yana ederede cell.
Rịba ama: oke okwu ( ! ) - nke dị n'elu ọnụ ọgụgụ 1 na keyboard - ejiri ya mee ihe dị ka onyewapụrụ n'etiti aha akwụkwọ na ederede - enweghị ohere.
Dịka ọmụmaatụ, iji si na Mpempe akwụkwọ 1 gaa cell HQ567 na Mpempe akwụkwọ 3, tinye Sheet3! HQ567 na akara akara nke igbe Go To ma pịa bọtịnụ Tinye .
Iji Igbe Igbe ka I Bugharịa Ihe Odide Excel
Dị ka e gosiri n'elu oyiyi dị n'elu, Igbe Igbe ahụ dị n'elu kọlụm A n'ime akwụkwọ ọrụ Excel ma enwere ike iji ya mee njem na mpaghara dị iche iche nke akwụkwọ ahụ na-eji ntụpọ sel .
Dị ka iwu Go Go , Igbe Igbe ahụ nwere ike ọ gaghị enyere gị aka na akwukwọ ọrụ nwere nanị ogidi na ọnụọgụ data, ma maka akwụkwọ edemede dị ukwuu, ma ọ bụ maka ndị nwere mpaghara data dị iche iche na-eji Igbe Aha ka esi ngwa ngwa si n'otu ebe gaa nke na-esote nwere ike ịbụ ụzọ dị irè iji rụọ ọrụ.
O di nwute, enweghi uzo iji nweta igbe oku na iji keyboard n'emeghi ka VBA macro. Ọrụ nkịtị chọrọ ịpị igbe Igbe ahụ na òké.
Nchịkọta Na-arụ Ọrụ Na Aha Igbe
Dị ka ọ dị, Igbe Aha ahụ na - egosiputa mkpụrụ ndụ ma ọ bụ aha aha maka cell ugbu a ma ọ bụ na - arụsi ọrụ ike - sel n'ime akwụkwọ ọrụ ugbu a nke edere ma ọ bụ igbe.
Mgbe emepere akwụkwọ ọpụpụ Excel ọhụrụ, site na ndabara, sel A1 na akuku aka ekpe nke akwụkwọ ọrụ ahụ bụ cell arụ ọrụ.
Ịbanye ntinye mkpụrụ ndụ ọhụrụ ma ọ bụ aha dị na Aha Igbe na ịpị bọtịnụ Tinye na- agbanwe cell arụ ọrụ ma na-agbanwe igbe ojii - na ihe a na-ahụ na ihuenyo tinyere ya - na ọnọdụ ọhụrụ.
Ịnyagharị na Igbe Igbe
Pịa na Igbe Igbe dị n'elu kọlụm A iji gosi amaokwu cell nke cell arụ ọrụ.
Pịnye na ntinye mkpụrụ ndụ nke ebe a chọrọ - dị ka HQ567.
Pịa igodo Tinye na keyboard.
Ka ị gaa na cell ọzọ, denye ederede ọzọ na Aha Igbe ma pịa bọtịnụ Tinye na keyboard.
Ị na-agagharị n'etiti Ngwaọrụ na Igbe Igbe
Dị ka Go To , Igbe Igbe ahụ nwekwara ike iji rụọ ọrụ na ọkwa dị iche iche n'otu akwụkwọ ọrụ ahụ site na ịbanye aha mpempe akwụkwọ yana ederede cell.
Dịka ọmụmaatụ, iji si na Mpempe akwụkwọ 1 gaa cell HQ567 na Sheet 3, tinye Sheet3! HQ567 na Igbe Igbe na pịa bọtịnụ Tinye .
Nzọụkwụ Nzọụkwụ Nzọụkwụ na Ntinye Ụdị Ụgwọ Ntanye na Excel
Esi eji 'Arụmụka' mee ihe ma ọ bụ usoro
Jiri Excel TRUNC arụ ọrụ iji Wepụ Decimals na-enweghị na-agbanye
Ọrụ Ọcha Excel
Chọpụta oge gị ugbu a na arụmọrụ DATEDIF Excel
Zoo na Ikwupụta Ihe Odide Ihe na Excel
Ọrụ Nchịkọta OZI OZI Google
Otu esi emepụta ọnụọgụ ọtụtụ nọmba na Excel
MEDIA MERE Ọ BỤRỤ Ụdị Nhazi
Kedu MacBook M Kwesịrị Ịzụta? The 5 Best MacBooks nke 2018
Esi Ndozi dochie 0x0000003D Njehie
Kedu ihe bụ DVT File?
Kedu ka Vudu Compares si Netflix
Kedu Ihe Njikọ Ịntanetị na Njikọ (ICS)?
Kedu ihe bụ BRL Njikwa?
Vivitek Qumi Q7 Plus DLP Video Projector - Profaịlụ foto
Netflix na Hulu vs Amazon Prime: Kedu Onye bụ Best?
Gbanwee Mpịakọta nke Mac nke Mmalite Chime
Kedu ihe bụ Linux Tarballs na Olee Otú I Nwere Ike Isi Jiri Ha
Usoro nke Advanced Arduino Projects
Otu esi enweta ihe kachasị na nyocha gị
Otu esi edozi agba agba agba na Windows XP
Enwere m ike iji onye na-ekpo ọkụ ọkụ ọkụ?
Otu esi arụ ọrụ na 10.1.1.1 Adreesị IP
Inweta Enyemaka Kacha
Esi Wụnye Sistemụ arụmọrụ Windows
Otu esi mepee ụlọ ahịa eBay
Otu esi gbanyụọ Njirimara Ịdị Mma Ihu Facebook